Puntland oo maanta maxkamad saareysa labo ruux oo Ajaanib ah – STAR FM SOMALIA
Labo nin oo u dhashay dalka Indonesia, laguna eedeeyay inay si sharcidaro ah uga kalluumeysanayeen Xeebaha Deeganada Maamulka Puntland, ayaa maanta oo Arbaco ah waxaa la filayaa in la soo taago Maxkamad ku taallo Magaalada Garowe ee Gobolka Nugaal.
Maxkamada darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta lasoo taagayaa Mohli Batiwawa oo ah 46-sano Jir u dhashay dalka Indonesia iyo Eng. Casiis Hermans oo ah 56-jir u dhashay dalka Indonesia, kuwaas oo lagu eedeeyay inay si sharci daro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Puntland.
Labadaan nin waxa ay ka mid ahaayeen 14 Shaqaale oo la socday Doontaasi, waxaase lagu reebay Magaalada Garowe labadan ruux, maadaama Puntland ay sheegtay inay masuul ka ahaayeen labadan Shaqsi kalluumaysiga Sharcidarada ah ee Xeebaha Puntland ay ka wadeen.
Xilliga Doonta la qabanaayay ayaa waxaa saarnaa Kaluun dhan 46 tan oo si sharcidaro ay uga aruursadeen Xeebaha Maamulka Puntland sida ay sheegeen Saraakiil ka tirsan Puntland.
Doonta ay wateen Dadkaan ayaa ka diiwaangashan dalka Yemen, laakiin waxaa laga leeyahay Waqooyiga Kuuriya.
Maxkamada ayaa la filayaa in maanta go’aan ay ka gaarto dadkaan kiiskooda, maadaama dhowr mar dib loo dhigay, islamarkaana cadeymo buuxa loo raadinaayay.